အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ExxonMobil ရေနံကုမ္ပဏီ ၏ နာမည်ကြီးအင်ဂျင်ဝိုင် Mobil Lubricants ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေနံ ExxonMobil ၏ ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်သော Mobil Lubricants ကို မြန်မာပြည်၏ တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ် MJL AKT Petroleum Co., Ltd. က ပြည်တွင်း ဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ချိရောင်းချပေးလျက်ရှိနေပါသည်။
ယခု Novotel Hotel တွင် ပြုလုပ်တဲ့ Join the Drive Promotion ကတော့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး Mobil အင်ဂျင်ဝိုင်ကို အစဉ်တစိုက် ဝယ်ယူအားပေးသော Customer များအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် Mobil 1, Mobil Super, Mobil Delvac အင်ဂျင်ဝိုင် 4L (or) 5L (or) 20L (or) 208L ၁ဗူးဝယ်ယူသူတိုင်း အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည့်အစီအစဉ်အား စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်၍ Promotion အစီအစဉ်အား မိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း တို့အနေဖြင့် Mobil အင်ဂျင်ဝိုင် တစ်ဗူးဝယ်ယူပြီး ပုံးတွင် ပါဝင်သည့် Luckydraw ကူပွန်ကိုဖြည့်စွက်ပြီး မိမိဝယ်ယူသည့်ဆိုင် (သို့မဟုတ်) စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် – (၁ဝ၄၆) သို့ပေးပို့ ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဆုမဲများအနေဖြင့် Winner Prize – Toyota VIOS Brand Newကားသစ်ကြီး (၁)စီးအပြင် ရွှေသားဆုမဲများအနေဖြင့် 1st Prize – ရွှေ ၁ကျပ်သား (၂)ဆု၊ 2nd Prize – ရွှေငါးမူးသား (၄)ဆု၊ 3rd Prize – ရွှေတစ်မတ်သား (၈)ဆု အား ကံထူးခွင့်ရရှိခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ Promotion ကာလအနေဖြင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၄)ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၅)ရက်နေ့အထိ (၄)လခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကားချစ်သူ Customer များနှင့် Mobil ချစ်သူများ ပါဝင်ကံစမ်းကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Mobil အင်ဂျင်ဝိုင်ကို အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ အရောင်းဆိုင်များ၊ Service Center များနှင့် Workshop များတွင် ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက Mobil ရန်ကုန်ရုံးချုပ် – အမှတ် – 4(A)၊ မေခလမ်း၊ မရန်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၁, ၈ဝ၂, ၈ဝ၃, ၈ဝ၄ နှင့် Hotline No. ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၆၊ ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၇ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်Mobil မှ ပြုလုပ်သည့် Join the Drive Promotion ပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများထဲမှ Samsung Handset များကိုမဲဖောက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အမရေိကနျနိုငျငံအခွစေိုကျ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးရနေံ ExxonMobil ၏ ထုတျကုနျတဈမြိုးဖွဈသော Mobil Lubricants ကို မွနျမာပွညျ၏ တဈဦးတညျးကိုယျစားလှယျ MJL AKT Petroleum Co., Ltd. က ပွညျတှငျး ဈေးကှကျသို့ ဖွနျ့ခြိရောငျးခပြေးလကျြရှိနပေါသညျ။ ယခု Novotel Hotel တှငျ ပွုလုပျတဲ့ Join the Drive Promotion ကတော့ အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံး Mobil အငျဂငျြဝိုငျကို အစဉျတစိုကျ ဝယျယူအားပေးသော Customer မြားအား ကြေးဇူးတုံ့ပွနျသောအားဖွငျ့ Mobil 1, Mobil Super, Mobil Delvac အငျဂငျြဝိုငျ 4L (or) 5L (or) 20L (or) 208L ၁ဗူးဝယျယူသူတိုငျး အတှကျ ပါဝငျ ကံစမျးခှငျ့ရရှိမညျ့အစီအစဉျအား စာနယျဇငျးမိတျဆကျပှဲပွုလုပျ၍ Promotion အစီအစဉျအား မိတျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ။ လူကွီးမငျး တို့အနဖွေငျ့ Mobil အငျဂငျြဝိုငျ တဈဗူးဝယျယူပွီး ပုံးတှငျ ပါဝငျသညျ့ Luckydraw ကူပှနျကိုဖွညျ့စှကျပွီး မိမိဝယျယူသညျ့ဆိုငျ (သို့မဟုတျ) စာတိုကျသတေ်တာအမှတျ – (၁ဝ၄၆) သို့ပေးပို့ ကံစမျးနိုငျမှာဖွဈပါသညျ။ ဆုမဲမြားအနဖွေငျ့ Winner Prize – Toyota VIOS Brand New ကားသဈကွီး (၁)စီးအပွငျ ရှသေားဆုမဲမြားအနဖွေငျ့ 1st Prize – ရှေ ၁ကပျြသား (၂)ဆု၊ 2nd Prize – ရှငေါးမူးသား (၄)ဆု၊ 3rd Prize – ရှတေဈမတျသား (၈)ဆု အား ကံထူးခှငျ့ရရှိခှငျ့ ရရှိမညျဖွဈပါသညျ။ Promotion ကာလအနဖွေငျ့ ၂ဝ၁၇ ခုနှဈ သွဂုတျလ (၁၄)ရကျမှ ဒီဇငျဘာလ (၁၅)ရကျနေ့အထိ (၄)လခနျ့ကွာမွငျ့မညျဖွဈသောကွောငျ့ ကားခဈြသူ Customer မြားနှငျ့ Mobil ခဈြသူမြား ပါဝငျကံစမျးကွပါရနျ ဖိတျချေါအပျပါသညျ။ ဒါ့အပွငျ Mobil အငျဂငျြဝိုငျကို အမွို့မွို့အနယျနယျရှိ အရောငျးဆိုငျမြား၊ Service Center မြားနှငျ့ Workshop မြားတှငျ ဝယျယူအားပေးနိုငျကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါသညျ။ အသေးစိတျသိလိုပါက Mobil ရနျကုနျရုံးခြုပျ – အမှတျ – 4(A)၊ မခေလမျး၊ မရနျးကုနျးမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။ ဖုနျးနံပါတျ – ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၁, ၈ဝ၂, ၈ဝ၃, ၈ဝ၄ နှငျ့ Hotline No. ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၆၊ ဝ၉-၇၉၉၇၉၉၈ဝ၇ သို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။ ထို့အပွငျMobil မှ ပွုလုပျသညျ့ Join the Drive Promotion ပှဲတှငျ တကျရောကျလာသူမြားထဲမှ Samsung Handset မြားကိုမဲဖောကျပေးခဲ့ပါသညျ။
လူမူကွန်ရက် ဝက်ဆိုဒ်တွင် လိုင်စင်မဲ့ကားများရောင်းနေသည့် အကောင့်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမည်
YBS ယဉ်ပေါ်၌ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်းယူသော အမျိုးသား ၂ဦးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ